Astaanta Qoraxda “The Sun” - Land Of Punt
Astaanta qoraxda mid inagu cusub ma aha waa astaan caan ah oo dunida laga isticmaalo waxaana calaamada qoraxda isticmaalaha ururada diimaha siiba kuwa aminsan ilaahyada isku jira oo ay kamid yihiin kiristan katooliga ah, hinduuga iyo khuraafadlayasha ilaahyada sadex ah caabuda. Arinka ilaahyada sadex ah, ee ay caabudan taarikhyin waxaa laga keenay oo markii ugu horeysay jeedka kalasoo baxay Nimruud. Dhulkii la odhanjiray Mesobotoomiya ee Baabilon ayey kasoo bilaabmeen xusida sadexda ilaah ee is dhalay.
Daalinkii Nimruud ayaa bilaabay inuu sheegto ilaah wuxuuna kudooday in ilaaha guud oo ulajeedo “BAAL” usoo cimaamaday oo soo wakiishay isagu inuu masuul ka yahay reer baabiloon. Markii uu dhintay waxaa xilkiisi la wareegay xaasika Semiraames oo tidhi Nimruud ayaa isoo waxyooda ee aniguna waykan. Intaanay dhiman ayey wiil wecel ah oo Nimruud dabadii dhashay ku tilmaantay inuu yahay falaadhi Nimruud oo BAAL qoraxda lajooga. Wakhtigaa qoraxda ayey ilaah guud u yaqaanen waxayna odhanjireen “BAAL”. Markay iyadiina dhimatay inankii oo la odhanjiray Taamuus ayaa ilaahnimo usoo cimaamatay. Nimruud, Samiraames iyo Tammus waxaa laysku odhanjiray sadex ilaah ee isdhalay ama oo isku jira “a divine father, wife & son, three in one”, oo udhiganta “TIRINITY”.
Qoraxada ayaa noqota astaanta Triquetra
Wakhti jaahiligaa reer baabiloon waxay caabudi jireen qoraxda oo lakala caabudi jiray sadexda galin ee kala ah qorax soo baxa markay cadceedu madaxa lasoo baxdo, Duhurka markay cadceedu ugu kulul shahay iyo Gabalku markuu dhaco. Sadexdaa wakhti islaamku waa uu mamnuucay in latukado iyadoo nayloo diidayo inaynaa is shabihiin qoomka Nimruud. Astaanta qoraxdu waxay kamid tahay astaamaha hayada “Rockerfeller foundation” shirkadaha ka iibiso ee aad looyaqaan waxaan isticmaala iyada oo noocyo badan looso dhigay isla qoomka sirta ibliis ku shaqeeya.
Sadexda galin ee qoroxda: Qoroxsoobaxa, Duhurka & gabal dhac (Three phases of the sun: Sun-rise, Zenith & Sunset)
Certainly, they are unbelievers who say: “Allah is one of three in a Trinity.” There is no god except One Allah. If they do not stop saying what they say, a painful punishment will befall the disbelievers among them. Surah 5. Al-Maida
astaanta qoraxda baal qorax caabud qoraxda RA the sun